စိမ်းလိုက်ကြစို့ (Vocabulary Lesson) - Myanmar Network
စိမ်းလိုက်ကြစို့ (Vocabulary Lesson)
Posted by Soe Soe Win on February 4, 2015 at 11:46 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဆင့်ပွားအဓိပ္ပါယ်များရှိတဲ့ အရောင်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ Blue ဆိုရင် ဝမ်းနည်းခြင်း၊ white ဆိုရင် ရိုးသားဖြူစင်ခြင်း၊ (ဖြူစင်တဲ့ မုသားကိုတောင် white lie တဲ့။ နောက်ပြီးမှည့်တစ်ပေါက် မစွန်းတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို lily white reputation လို့ဆိုကြတယ်။) အနက်ရောင် black ကိုလည်း သိပ်မကောင်းတဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေသုံးကြပါရောလား။ (ဥပမာ - black moment in history ဆိုတာမျိုးပေါ့)။ အရောင်တွေအကြောင်း အရင်ကလည်း အလျှင်းသင့်သလို တင်ပြပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ နောက်ထပ် ဥပမာတွေ ထပ်မပေးလိုတော့ပါဘူး။ လိုရင်းကိုဘဲ ပြန်သွားကြရအောင်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ အရောင်တွေကို အခြားအဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့ တင်စားသုံးကြတဲ့ အထဲမှာတော့ “အစိမ်းရောင်” green ကိုတော့ အရောင်တွေရဲ့ “ဘိုးအေ” လို့ တင်စားပြောရလောက်တယ်။ သဘာဝ မြစိမ်းရောင် မြက်ခင်းတွေ၊ သစ်ပင်ပန်းမာန် တောတောင်တွေကို green နဲ့တင်စားတာတွေ အပြင် မနာလိုသဝန်တိုခြင်း၊ အတွေ့အကြုံ နုနယ်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းစတဲ့ အဓိပ္ပါယ်အနေနဲ့ပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖေါ်ညွှန်းသုံးစွဲပါတယ်။ ၂၀ ရာစု နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကို ကျွန်တော်တို့ သိသိသာသာခံစားလာရတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ရှာဖွေထောက်ပြကြတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း green ရဲ့ နောက်ထပ် ဆင့်ပွားအသုံးထပ်တိုးလာပါတယ်။ ဒါကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ environmental conscience နဲ့ ဆိုိင်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ ရိပ်စားမိရောပေါ့နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ green ဆိုတဲ့ စကားလုံးက လူသုံးများတဲ့ buzz word ဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွေမှာ မရှိမဖြစ် စကားလုံးတစ်လုံး ဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့် ၂၁ ရာစုမှာ green ရဲ့ အဓိက အဓိပ္ပါယ် core meaning က ဘာလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ contemporary dictionary writer တွေတောင် ခေါင်းခြောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဒီအသုံးတွေဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ ပိုမိုခိုင်မြဲတဲ့ နေရာကို ရရှိလျှက် ရှိနေပါတယ်။ မကြာသေးမီကတင်ပဲ green ဆိုတဲ့ adjective ကို verb အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောင်း convert လုပ်ပြီးသုံးလာကြပါတယ်။
Green ကို verb အနေနဲ့ အဓိကအားဖြင့် energy အများကြီးသုံးရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုများကို environmentally friendly သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်အောင်လုပ်သည်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သုံးပါတယ်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်၊ အဆောက်အဦးတွင်း (မိမိရဲ့ အိမ်၊ အလုပ်ခွင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် စသည့်) မှာ ဥပါဒ် မဖြစ်စေတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ သုံးတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တို့ ကျင့်သုံးတာကို transitive verb အနေနဲ့ သုံးတာပေါ့။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်အောင် ပလပ်စတစ်အိပ်တွေ မသုံးဘဲ စက္ကူအိပ် သုံးစွဲတာ၊ ရေကိုချွေတာသုံးစွဲတာ၊ ပစ္စည်းတွေကိုလှည့်ပတ်သုံးစွဲတာ၊ စတာတွေလုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေထဲက အချို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
'Green'(verb) refers to the activity of incorporating eco-friendly products and practices intoaparticular environment, whether it isaperson's home, workplace or general lifestyle.
ဒီတော့ verb ဖြစ်တဲ့ green ရဲ့ noun form ဖြစ်လာတဲ့ greening ဆိုတာနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းတည်မြဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် ecological measures တွေဖြစ်တဲ့ ပြန်လည် လှည့်ပတ် သုံးစွဲခြင်း “recycling” ၊ စွမ်းအင် ခြွှေတာခြင်း “energy efficiency” ၊ ပြန်လည် သန့်စင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း “renewable resources” ၊ ရရှိပြီးသား အခြေအနေကောင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်း "sustainable development" နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ခြင်း “reducing pollution” စသည်တို့ကို super-ordinate terms တွေ အနေနဲ့ တာဝန်ကြီးကြီးကိုယူထားကြပါတယ်။
Green ကို verb အနေနဲ့ သုံးတာကတော့ အခုမှ စတင်တာလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ Green (verb) ကို မူလကတည်းက ဖေါ်ညွှန်းနေကြဖြစ်တဲ့ သစ်ပင်ပန်းပင်တွေ စိမ်းလန်းစိုပြေစေသည် ဆိုတဲ့ sense နဲ့ သုံးတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး sense နဲ့ ကိုတော့ အခုမှ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် စတင်သုံးစွဲလာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် environmental sense ကိုဖေါ်ဆောင်တဲ့ adjective "green" ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အရောင် တစ်ရောင်လည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရောင်ကတော့ brown ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေပြီးမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို brown energy လို့ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Macmillan Dictionary website ၏ Buzz Word of the Week မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Right enough/Great/Good hea...
Intensive Reading အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Permalink Reply by Lin Lin Aye on February 4, 2015 at 17:34
Pls let me share :)
Permalink Reply by Yone Lay on February 5, 2015 at 22:32
Plez share 2me
Permalink Reply by htaylim on January 22, 2016 at 8:39
Permalink Reply by Htay Htay on January 23, 2016 at 22:27